Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguGeri
Eli ligumbi elinye kwigumbi lokulala eli-2 elisanda kulungiswa. Ikhitshi elitsha, ibhafu entsha, iiyunithi ezintsha ze-AC kwigumbi ngalinye lokulala. Indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye nendawo enkulu yokutya ekhitshini ikunika indawo eninzi yokusasaza, kwaye wonwabele ukuba bucala kwakho.
Le yindlu enamagumbi amabini kwindlu yosapho emine. Zonke iindwendwe zineekhowudi zazo zokungena zokungena kwindlu engenazitshixo, kwaye iikhowudi zitshintshwa phakathi kondwendwe ngalunye, ukwenzela ukhuseleko olongezelelweyo nokhuseleko. Kukho ikhitshi eligcwele ngokupheleleyo elineembiza, iipani, izitya, iikomityi, kunye nempahla yokutyela ekhaya. Kukwakho neembiza neepani ezininzi kunye neebhodi zokusika eziza kunceda uninzi lweemfuno zokulungiselela ukutya. Ukuba kukho into oyifunayo, vele undibuze kwaye ndiyakwazi ukukunika. Igumbi ngalinye lixhotyiswe ngamashiti amabini, iingubo, izinto zokuthuthuzela, kunye nemiqamelo eyongezelelweyo yokuthuthuzela kuzo zonke iintlobo zemozulu. Kukho i-ayina kunye nebhodi yoku-ayina kwisakhiwo ngokunjalo. Kukho iifestile ezinkulu ezininzi ezivumela ukukhanya kwendalo ngexesha lasemini kunye neendawo ezininzi eziphezulu kunye nezibane zokugcina amagumbi ekhanyiswe kakuhle ukuze kukhuseleke kwaye kube lula ngexesha langokuhlwa. Kukho ii-closets ezinkulu kunye nokugcinwa okongeziweyo phantsi kwebhedi okanye ecaleni kwebhedi kwigumbi ngalinye ngokunjalo. Ukufuphi nesikhululo sebhasi (malunga nezindlu ezimbini kude) kunye neSikhululo sikaLoliwe saseLong Island (malunga neebhloko ezisi-8 kude) ukufikelela lula kuyo yonke into enokunikelwa yiNYC kwaye uhambo olukhawulezayo oluya eManhattan lumalunga nemizuzu engama-40 kuphela ngololiwe olula. Indlu ine-wifi, kwaye isimahla nayo.
IMineola isembindini wayo yonke indawo yeLong Island, ijikelezwe ziipaki ezininzi zalapha, iindawo zokutyela, iivenkile ezinkulu kunye neeholo zekonsathi. Ukuba ufuna ukuya kwindawo ethile okanye wenze into ethile, mhlawumbi unokufumana indawo onokuya kuyo okanye into yokwenza iintsuku ezisixhenxe ngeveki.
Nditsalela umnxeba, itekisi, okanye i-imeyile ngamaxesha onke. Ndine-App ka-Airbnb kwi-smartphone yam kwaye ndiyijonga malunga nezihlandlo ezi-3-4 ngosuku. Ngexesha likaxakeka, iindwendwe zinenombolo yam yeselula kwaye zingandifowunela nangaliphi na ixesha emini okanye ebusuku.
Nditsalela umnxeba, itekisi, okanye i-imeyile ngamaxesha onke. Ndine-App ka-Airbnb kwi-smartphone yam kwaye ndiyijonga malunga nezihlandlo ezi-3-4 ngosuku. Ngexesha likaxakeka, iin…